Tamin'ny fotoana nanombohan'ny fikorontanan'ny hafanana nandrevo anay, dia nitady fialan-tsasatra tokoa izahay. Amin'ny toe-javatra toy izany dia mety tsy dia misaintsaina momba ny faritra, ny toetrandro, ny fivelomana ary ny fitaovana mavesatra mavesatra ny olona mpitovo toa ahy. Na izany na tsy izany, raha toa ka misy fianakaviana amin'ny ankapobeny ny fivezivezenao dia manaova hotchpotch lehibe ary maka ilay toerana haleha, ny fanontaniana iray tapitrisa dolara. Soa ihany, i India dia mirehareha amin'ny toerana lavitra fitsangatsanganana izay afaka mifamatotra amin'ny tsirairay ary mandeha amin'ny vanim-potoana rehetra. Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny toerana tsara indrindra any Avaratra-Atsinanana India hijerena ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra izay ahafahanao manantena fiadanam-po izaitsizy sy traikefa hotiavina amin'ny taona manaraka. Mamandrika ny tapakila an'habakabaka ary miomàna hijery ny faritra mbola tsy voadinika ao Atsinanana Atsinanana.
Pelling, Sikkim: Amin'ny vintana tsy ampoizinao fa handany ny fahavaratrao dia handrava toerana fitobiana hafa ankoatry ny Shivalik na Western Ghats, mankany amin'ny Pelling, ilay toerana fitobiana malaza ao Sikkim. Iray amin'ireo toerana fialantsasatra tsara indrindra any Avaratra-Atsinanana India, Peling dia eo amin'ny 10 km miala ny Gyalshing, foiben'ny foibe. Ny ampahany mampatanjaka indrindra amin'ny fitsangatsanganana any Pelling dia ny fomba fijery mahatalanjona an'i Kanchenjunga tamin'ny hazavàna voalohany rehefa mangina ny lohasaha ary mahazo fotoana mamirapiratra mifangaro amin'ny natiora ianao ary mihetsika voajanahary. Ny monasiteran'ny Pemayangtse malaza dia iray kilaometatra monja miala an'i Pelling izay ahafahanao mandeha amin'ny alàlan'ny dia an-tongotra.
Mokokchung, Nagaland: Mety nahita tanàna sy vondrona foko vitsivitsy ianao nandritra ny androm-piainanao, kanefa ny faritra Mokokchung any Nagaland dia hampahafantatra anao ireo singa hafahafa izay tsy hitanao any amin'ny toerana hafa any India. Manodidina ny 6 ora vao vita io toerana io avy any Kohima, renivohitr'i Nagaland. Na dia eo aza ny zava-misy fa ny vondrona iray manontolo amin'ity faritra ity dia manaraka ny Kristianisma, nefa mbola tsy nilavo lefona tamin'ny fomba fanao mahazatra; zavatra mahatalanjona izay azonao zahana rehefa mandeha any Mokokchung. Ireo tanàna kely amin'ity faritra ity dia hita eo amin'ny havoana maintso ary fananan'ny foko Ao Naga mpifanila vodirindrina aminy.
Tawang, Arunachal Pradesh: Kanvas marolafy misy loko volon-kakao sy maintso, Tawang no toerana misy ny Monpas. Ny monasiteran'ny Buddhist mahafinaritra, ny farihy mamiratra ary ny riandrano latsaka no mandany ity toerana fitsangatsanganana Avaratra-Atsinanana ity izay tsy hita na dia iray aza ny paradisa. Azonao atao ny tsy misy fandaharana mihatra amin'ny fitsangatsanganana satria manana an'i Tawang ampy hiaina mifanaraka amin'ny fanirianao. Tsy toy ny vondrom-piarahamonina indianina hafa tsy mila mihazakazaka lavitra ianao hitsidihanao ireo vondrom-pivavahany toa an'i Taktsang Gompa na Monasiteran'i Tawang. Noho izany dia manana fotoana ampy ianao hijerena ireo fanangonana curios sy soratra masina ara-pivavahana bodista.
Ziro, Arunachal Pradesh: Raha sanatria ka manidina amin'ny fahavaratra ianao hiala sasatra amin'ny fomba fiaina tsotra ary mitady orinasa tsy dia manadino nefa mpitsidika manome aingam-panahy, dia Ziro Valley any Arunachal Pradesh no toerana mety indrindra. Ny tanimbary miroborobo, ny mimonomonona ary ny faritra milamina dia hahasosotra anao ary hamporisika anao hipetraka eo amoron'ny tampon'ny havoana kely hahatsapa ho voajanahary. Ny lava manitatra ny maitso izay maniry mitovy amin'izany ny hitan'ny masonao sy ny toetrandro mahafinaritra dia hahatonga anao hahatsapa ho voadoka. Mandehana mijery ny tanàna kelin'ny foko Apatani izay akaiky anao. Jereo tsara ny fomba fiainany dia ho hitanao ny fomba fanatanjahantenan'ity foko ity kiraro orona volotsangana goavambe.
Dzukou Valley, Nagaland: Manoro hevitra anao ianao mba handamina fitsangantsanganana mankany amin'ny lohasaha Dzukou raha toa ianao sy ny manan-danja iray hafa dia mazoto sy miankohoka hizaha ny hakanton'ny toetra faran'izay voafantina indrindra amin'ny maso misokatra. Afenina amin'ny haavo 2438 m, ity lohasaha ity no tanin'ireo mpandeha an-tongotra izay tsy mahay mitantana ny vidin'ny fanombanana manahirana. Ity tobim-piantsonana mahafinaritra any Nagaland ity dia rakotra voninkazo maniry tsara amin'ny fahavaratra. Zokou dia miorina eo an-tsisin'i Manipur sy Nagaland ary ny fizotran'ny dia an'io lohasaha io dia mirona amin'ny zavatra hafa fa mora ny manonon-tena.
Amin'ireo toerana maro dia maro no nanoroana hevitra anao hitsidika ny Avaratra atsinanan'i India amin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Martsa satria mahafinaritra ny toetrandro ary tena mahafinaritra. Fandriho fotsiny ny tapakilan'ny sidinao ary miomàna ho tia ny natiora.